China 120w Gallium Nitride adaptatera misy plug marobe (ho an'ny rindrina & birao) mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
120w Gallium Nitride adaptatera misy plug maromaro (ho an'ny rindrina & birao)
Ampidiro: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.5A MAx
Output tokana: Type-C1: 100w;Karazana-C2: 100w；USB1:30w；USB2:30w.
AC 100V- 240V, 50/60Hz, 1.5A MAx
Karazana- C1: 100wType- C2: 100wUSB1: 30w
Karazana- C1+karazana- C 2: 60w+60wType- C1+USB 1: 87w+30wType- C1+USB 2: 87w+30w
Karazana- C2+USB 1: 87w+30w
Karazana- C2+USB 2: 87w+30w
Karazana- C1+ Karazana- C2+USB1: 60w+30w+30wType- C1+karazana- C2+ USB2: 60w+30w+30w
Karazana- C1+Type-C2+USB1+USB2: 60w+30w+15w+15w
120w gallium nitride.Ny rindrina rindrina, ny birao dia azo ampiasaina.Multi-interface fast charge.Product endri-javatra: overheating fiarovana, overvoltage fiarovana, efatra-port haingana fiampangana, batterie fiarovana, manan-tsaina famantarana ny mifanandrify malefaka sy ny current.Nahoana no mifidy gallium nitride?
Ny interface type-c roa dia 100w fast charge, izay afaka mameno ny solosaina finday.Ny seranan-tsambo USB roa dia fiampangana haingana 30w, izay azo ampifanarahana amin'ny telefaona iPhone sy Android.
Aforitra plug, mora entina.
ADVANCED GAN TECHNOLOGY：Izy io dia manana conductivity mafana avo lenta, fanoherana ny mari-pana ambony, fanoherana ny taratra, fanoherana ny asidra sy alkali, ny hery sy ny hamafin'ny hery, izay mampihena ny habeny sy ny hakitroky ny charger.
CHARGER POWERFUL & EFFICIENT: Mahazoa famandrihana tsara indrindra azo atao miaraka amin'ny teknolojia GaN mandroso.Manatsara ny fahombiazan'ny famandrihana ho mihoatra ny 90% izany.Ity charger ity dia manana 1 x 65w USB C Port, 1 x 30w USB C port ary 2 x USB A port.Tsy vitan'ny hoe manome hery haingam-pandeha 65w ho an'ny fitaovana USB-C anao izy io fa manolotra fiampangana miaraka amin'ny takelakao sy finday miaraka amin'ireo seranana USB-A fanampiny.
HAIZANA COMPACT：Ny mampiavaka ny teknolojia GaN dia ny fanatsarana ny fahombiazan'ny famandrihana ary ny fampihenana ny haben'ny charger ho 50% kely kokoa noho ny charger mahazatra.
FAMPISEHOANA MIARAKA: Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana USB-C sy USB-A avy amin'ny telefaona mankany amin'ny takelaka mankany amin'ny solosaina finday, iPhone, iPad, Google Pixel, Samsung, LG ary maro hafa!Ity dia mifanaraka amin'ny Samsung Galaxy S20+/Note 20 Ultra.Ny fiampangana haingana dia tohana ho an'ny iPhones rehefa ampiasaina amin'ny tariby Apple USB-C to Lightning tany am-boalohany.( FANAMARIHANA: Ity charger ity dia tsy misy USB C mankany amin'ny Lightning Cable).
Protocol feno, manohana ny fitaovana rehetra.Mifanaraka amin'ny PD3.0, QC4 +, QC3.0, SCP, FCP, AFC, MTK ary fiampangana haingana hafa, finday, takelaka, fitaovana azo ampiasaina, mifamadika fiampangana manodidina rehetra
Mihoatra ny 10 taona traikefa momba ny OEM / ODM ho an'ny orinasa elektronika mpanjifa
Mifantoka indrindra amin'ny andiany Apples sy ny vokatra andiany ms izahay.Ny vokatra rehetra dia manana ny endrika tsy manam-paharoa mba hifanaraka amin'ny vokatra.Miaraka amin'ny teknolojia famokarana matotra sy ekipa fanaraha-maso kalitao matihanina, afaka 'miantoka ny kalitao ambony indrindra amin'ny vokatra isika
Famerenam-bola tsy misy fepetra na fanoloana ny fotoana fiantohana.
Manao izay tratry ny herinay foana izahay mba hitazonana ny vidiny ho ambany araka izay azo atao nefa tsy manao sorona ny kalitao ary manadihady tsy tapaka ireo fomba vaovao amin'ny fanatsarana ny kalitao.
Santionany maimaim-poana, fanaterana haingana, serivisy mora azo mivantana famatsiana orinasa, vidiny mifaninana, kalitao voafehy
RE: Raha te-hizaha toetra santionany ianao, santionany rehetra dia misy amin'ny tahiry ary ny santionany dia halefa amin'ny alalan'ny DHL, Fedex, UPS, TNT sns ao anatin'ny 3 andro
F: Inona ny fe-potoana fandoavanao?
RE:Paypal , T / T sns. Ho an'ny baiko marobe dia manoro hevitra ny fametrahana 30%, ny fifandanjana mialoha ny fandefasana.
F: Afaka manao pirinty miaraka amin'ny logo ve isika?
RE: Eny, OEM / ODM logo na fonosana dia tsy olana,omeo anay fotsiny ny endrikao, hanao santionany izahay hanamarina anao tsy ho ela.
F: Ahoana ny momba ny fiantohana
RE: Manana ekipa QC izahay, alohan'ny fandefasana dia hanamarina ny kalitao izahay ary hizaha toetra azy.ny vokatra rehetra dia manana CE FCC ROSH taratasy fankatoavana.Warranty: 1 taona.
F: Momba ny saran'ny fandefasana
RE: Rehefa manamarina ny saran'ny fandefasana izahay dia hifidy ny iraka mora indrindra sy azo antoka indrindra
teo aloha: 20w fast charge portble power adapter ho an'ny iphone
Manaraka: USB-C docking faladiany amin'ny Wireless charger